Imigaqo yeNkonzo-NJ kunye ne-NY yeNdawo yokuThengisa, ukuKhuselwa, ukuKhuselwa kwembonakalo kunye nabameli beBanki
Imigaqo yenkonzo ye Egxininisa.com
Olu lwazi ulufumanayo kule ndawo ayisiyo, kwaye ayenzelwanga ukuba ibe yingcebiso kwezomthetho. Singamagqwetha, nangona kunjalo, asingommeli wakho kude kube usayina isivumelwano sokugcina kunye nathi. Kuya kufuneka ukuba udibane negqwetha ngengcebiso malunga nemeko yakho, ungasebenzisi nantoni na oyifumana kwi-intanethi njengesiseko sokuzikhusela. Nceda unxibelelane nathi ngemibuzo. Siyazamkela iifowuni zakho, iileta kunye ne-imeyile. Ukunxibelelana nathi akwenzi ubudlelwane begqwetha-nabaxhasi. Nceda ungathumeli ulwazi oluyimfihlo kuthi kude kube kukho ubudlelwane begqwetha kunye nomthengi kwaye sicela ulwazi. Kungenzeka ukuba sele sibonisa elinye icala ngayo nayiphi na ingxaki ojamelene nayo. Zonke ubungqina kule ndawo zithathwe kuVavanyo lukaGoogle, kunye ne-Yelp. Ukuba ungathanda izingqinisiso, nceda uthumele isicelo nge-imeyile [Imeyile ikhuselwe] kwaye singakunika ezininzi.
SiyiNew Jersey kunye neNew York eThembekileyo yabathengi bokuKhusela isiQinisekiso soMthetho, iiNdawo zokuThengisa, iMithetho yoSapho, kunye Khetha umthetho womthetho
Sijolise ekuncedeni iintsapho kunye namashishini amancinci.
Indawo le yintengiso